ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Banana Republic - ရေမွှေး, eau က de toilette, ဘောင်းဘီ, အဝတ်, ဆင်မြန်း, outerwear, လက်ကိုင်အိတ်, ဖိနပ်
ငှက်ပျောသမ္မတနိုင်ငံ - အဝတ်အစား, အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ, ရေမွှေး, အိမ်သူအိမ်သားကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးထားတဲ့အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အဖွင့်ကတည်းကကုမ္ပဏီခရီးသွားများအတွက်အဝတ်အစားများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်စေ့စပ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်နေ့စဉ်အမှုအရာများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝတ်စုံကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ငှက်ပျောသမ္မတနိုင်ငံ - ဘာအမှတ်တံဆိပ်?
ဘာအမှတ်တံဆိပ် Banana Republic သိ. စိတ်ဝင်စားအတော်များများဖက်ရှင်အမျိုးသမီးတွေ? ဒါဟာလက်ထပ်စုံတွဲ Mel နှင့်ပက်ထရီရှာ Ziegler ကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့က 1978 ခုနှစ်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆိုင်ဖွင့်လှစ်။5ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှစ်ပေါင်း«အဆိုပါ GapInc »ကော်ပိုရေးရှင်းကဝယ်ယူခဲ့သည်။ 1986 ခုနှစ်တွင်သူသည်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံး catalog ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်တစ်နှစ်အကြာတွင်မဂ္ဂဇင်း«ခရီးများထွက်ခြင်း»ကွဲပြားခြားနားသောခရီးအပေါ်အလေးပေးသော။ 1988 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်သူကုမ္ပဏီစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်များ၏သမိုင်း Mel Ziegler များအတွက်ဂျာကင်အင်္ကျီ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ သူကမျှမပိုသေးစိတျနဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ သြစတြေးလျနေစဉ်, သူကသူ့ဇနီးတို့ကဆောင်ရွက်ထားပြီးသူ့ရဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီ၏နေအိမ်သုံးဆောင်ခဲ့လေ၏။ သူမသည်တဦးတည်းအရာသူမကအပြည့်အဝအားလုံးဦးစားပေးအိမ်ထောင်ဖက်ကျေနပ်ကြောင်း, မိမိခင်ပွန်းဘို့အများဆုံးအဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်စေချင်တယ်။ ပက်ထရီရှာတဲ့ပါရမီဒီဇိုင်နာခဲ့, သူအများအပြားအသစ်ကထူးခြားတဲ့ဒြပ်စင်မိတ်ဆက်: အတံတောင်ဆစ်ချိုးအပေါ်ချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ horn နှင့်သစ်သားချိတ်ကနေခလုတ်ကဆက်ပြောသည်။
ရလဒ်အဖြစ် Melo အဘိဓါန်ဒီဂျာကင်အင်္ကျီကြိုက်တယ်, သူ၏မိတ်ဆွေအများအပြားဂုဏ်သိက္ခာ၏အဝတ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အနည်းငယ်အပိုင်းပိုင်းအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲစုံတွဲခွေးလှေးစျေးကွက်မှာတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းများအနေဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အဝတ်ကိုဖန်တီးရန်စတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ«အဆိုပါ GapInc »ဝယ်တဲ့အခါမှာအမှုပေါင်းအမှတ်တံဆိပ်ကြီးထွားဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ပက်ထရီရှာကတည်းကနေ့ရက်ကာလအဘို့နဂိုအတိုင်းအဝတ်မော်ဒယ်သစ်ကိုဖန်တီးရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မတ်မတ်ရှည်လျားသောခရီးစဉ်အတွင်းနှင့်အဖြစ်အသုံးပြုအလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့ခဲ့ကြသည် ပေါ့ပေါ့ wear ။
ကမ္ဘာတဝှမ်းဖက်ရှင်တွေထဲမှာအလွန်ရေပန်းစားအဝတ်အစား Banana Republic ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းယင်း၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများအနက်စာရင်းနိုင်ပါတယ်:
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်များ၏အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ပါတီတွေ, စီးပွားရေးဗီရိုပစ္စည်းများ, ပေါ့ပေါ့စတိုင်မူကွဲများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကား,
1990 ကတည်းကတောက်တောက်နဲ့ရောင်စုံမော်ဒယ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်။ အရောင်စစ်တပ်ထွက်သွားကြနှင့်ပိုမိုသာမန်ထက်အဝတ်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်;
outerwear များထုတ်လုပ်အတွက် cashmere နှင့်တရားစွဲနိုင်။
လက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီ Banana Republic အောက်ပါအချက်များကိုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်ကြောင့်ဗီရိုပစ္စည်းများတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့မျဉ်းကြောင်းသည်:
ပေါ့ပေါ့ - ဂျင်းဘောင်းဘီ-ဂျပိန်, ရည်းစား, leggings နှင့် Jogger, အဆင်ပြေဆင်မြန်းခြင်းနှင့်အဝတ်အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု, Banana Republic turtleneck;
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - တစ်ဦးထက်ပိုတင်းကျပ်သောအရောင်အမှုအရာကိုဆိုလိုသည် - က asymmetry နှင့်အတူ jackets ခံရ, ပျမ်းမျှအလျားစကတ်အကျီသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း;
အမှတ်တံဆိပ်သူတို့ကို၏အဓိကအင်္ဂါရပ် wear စဉ်အတွင်းအဆင်ပြေစေရန်နှင့်နှစ်သိမ့်ဖြစ်ပါသည်, swimsuits ကိစ္စကိုအာရုံစိုက်။
Banana Republic ၏ရင်ခွင်
ဆောင်းဦး-နွေဦးကာလအတွက်အမျိုးသမီးအင်္ကျီ Banana Republic ရန်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်:
အသုံးအများဆုံးအရောင် - အနက်ရောင်အဝါရောင်, အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်တစ်သတိပညာအဝါနုရောင်ရှိသောဖြစ်၏
ခါးပတ်အားဖွငျ့ပုံထဲမှာ fixed နှင့်တစ်ဦး V-shaped တံခါးဝရှိပြီးသောဝယ်လိုအားမော်ဒယ်,
တစ်အလှဆင်ဒြပ်စင်အဖြစ်လက်တွေ့ကျတဲ့ function ကိုများနှင့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စုပ္ပန်နှစ်ခုဘက်အိတ်ကပ် cloaked ။
ကုတ်အင်္ကျီ Banana Republic
ကြော့လေးတို့သည်လည်းပိုနှစ်သက်သူကိုအမြိုးသမီးမြားအဘို့အထိုကဲ့သို့သော Banana Republic အင်္ကျီအဖြစ် outerwear ကိုက်ညီ။ ၎င်း၏ထူးခြားသော features တွေအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
ငှက်ပျောသမ္မတနိုင်ငံမော်ဒယ်များခတ်သို့မဟုတ်နှင့်အတူတစ်ကော်လာကိုတင်ပြ ရပ်-up, ကော်လာ ;
ခါးပတ်သို့မဟုတ်ခလုတ်အဖြစ် zmeyka- "လျှပ်စီး" လုပျဆောငျနိုငျ;
ဂျာကင်အင်္ကျီ Banana Republic
ဂျာကင်အင်္ကျီ - ဖက်ရှင်အဝတ်အစား Banana Republic တင်ဆက်ထားတဲ့အခြားအမျိုးမျိုး။ သူ့အဘို့ဤပိုင်ထိုက်သောအသေးစိတျ:
ဖြတ်တောက်မှုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလသို့မဟုတ် Demi ဂျအတွက်ပေါ်ပေါက်;
Demi ဂျာကင်အင်္ကျီကခေတ်မီဆန်းပြားအောင်အခြမ်းအိတ်ကပ်, အခြားအသေးအသေးစိတျ, အစွန်းပတ်လည်ရော်ဘာတီးဝိုင်းနှင့်အတူတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်,
, အောက်ခြေမှာ, တဦးတည်းလက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအတွင်းပိုင်းရင်ဘတ်ပေါ်; ငှက်ပျောသီးသမ္မတနိုင်ငံဂျာကင်အင်္ကျီကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအတွက်အိတ်ကပ်ရှိစေခြင်းငှါ
အိတ်ကပ်, ၎င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်သာလျှပ်စီးသက်သေအထောက်အထား overhead သို့မဟုတ်ဝှက်ထားသောနိုင်ပါတယ်;
ဆောငျးရာသီအကျီအတွက်အင်းလေးသားမွေးအလှဆင်ကော်လာ, ပနျးပှားကိုမြှ, cuff, အိတ်ကပ်အဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်ပိုမိုပူနွေးခြင်းနှင့် windproof ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ပန်းခြံ Banana Republic
အမျိုးသမီးပန်းခြံ Banana Republic ကဲ့သို့သောအရာအတွက်ပုံရိပ်တွေ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားသည် ပေါ့ပေါ့စတိုင် ။ ဒါဟာအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်:
ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဖြောင့်ဖြတ်ခြင်းနှင့် silhouette ရှိပါတယ်;
က Velcro သိုင်းကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်, ဝှက်ထားစေခြင်းငှါအရာဇစ်-ပိတ်သိမ်း၏မျက်နှာစာပေါ်ပစ္စုပ္ပန်၏,
မကြာခဏခါးခါးပတ်အတွက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ရာအရပ်၌ Banana Republic ဇာပန်းခြံများအတွက်,
ထိုကဲ့သို့သောအကျီဆန္ဒရှိလျှင်, ဖယ်ရှားစေခြင်းငှါအရာ, ပူနွေးချသို့မဟုတ်ဒြပ်နံရံတပ်ဆင်ထား;
branded ပန်းခြံများအတွက်အဝါနုရောင်ရှိသော, ဒါမှမဟုတ်မီးခိုးရောင်နားမှာကလွှမ်းမိုးတစ်ချိန်တည်းမှာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုအသုံးပြုကြသည်။
စားဆင်ယင် Banana Republic
မော်ဒယ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲဖက်ရှင်ဝတ်စုံ Banana Republic ပေးအပ်သည်။ သူတို့တွင်သည်အောက်ပါနေသောခေါင်းစဉ်:
နွေရာသီထုတ်ကုန်စားဆင်ယင်များ၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာတစ်ဝှမ်းတွင်တည်ရှိပြီးထားတဲ့ပန်း motif, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ကြီးမားသောအစိမ်းရောင်သစ်ရွက်နှင့်အတူပန်းစည်း, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့ပန်းပွင့်,
နွေရာသီအမှုအရာကြိုးတိုအင်္ကျီလက်ကိုဖြည့်နိုင်, စားဆင်ယင်ပခုံးနှင့်လက်မောင်းဖွင့်, ထိပ်တန်းနိုင်ပါတယ်;
ငှက်ပျောသမ္မတနိုင်ငံကုမ္ပဏီကောင်းစွာရုံးသွားဘို့အသင့်လျော်ဖြစ်နိုင်ပါသည်သောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပုံစံအတွက်ဖန်တီးဆင်မြန်း။ သူတို့ကအလှဆင်တဲ့နိမ့်ဆုံးဥပမာ, တဦးတည်းကို item, တစ်ဦး Basque သို့မဟုတ်လျှပ်စီးပစ္စုပ္ပန်ကွဲပြားစေခြင်းငှါဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း,
ရုံးအဘို့အဆင်မြန်းကျောခိုင်းထားသောအရောင်များကိုအသုံးပြုပါက, မီးခိုးရောင်အနက်ရောင်, အဝါနုရောင်ရှိသောတန်ချိန်ပါပဲ။
ဘောင်းဘီ - ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Banana Republic ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဝတ်အစားနောက်ထပ်ဆောင်းပါး။ သူတို့ဟာစတိုင်များအမျိုးမျိုးရှိသည်:
သင်ဂန္ "စီးကရက်" သို့မဟုတ် Chino, သာမန်ထက် culottes တွေ့နိုင်ပါသည် branded အမှုအရာတို့တွင်အ;
အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟုကြပြီတိကျခိုင်မာစွာမော်ဒယ်များသို့မဟုတ်ဖြောင့် silhouette အများကြီးရှိပါတယ်;
အဲဒီမှာပန်းပုံနှိပ်ရာတွင်အသုံးပြုရသောဘောင်းဘီ Banana Republic, တစ်ဦးချွတ်ဆဲလ်။
စကတ် Banana Republic
အသုံးအများဆုံး option ကို - တစ် MIDI စကတ် Banana Republic ။ အသေးစားသို့မဟုတ် Maxi ၏အရှည်သည်အလွန်ရှားပါးလျက်ရှိ၏
အများစုကအဝတ်တစ်ဦးရှိ မြင့်မားသောခါး ပုံအတွက်ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့ကို enable မညျဖွစျကွောငျး,
ထုတ်ကုန် Self-အရောင်ဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့သောပုံနှိပ်ဆံ့နိုင်သည်ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်ပန်းဒီဇိုင်းများ, ဒဏ်ချက်;
လူကြိုက်များခဲတံ, သင်မူကားရွေးချယ်စရာတွေ့ဆုံရန်နှင့်ခေါင်းလောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုအ pleated အဝတ်, flounces နှင့်ဖြည့်ဆည်း။
ဖိနပ် Banana Republic
ဒီအမှတ်တံဆိပ်၏ဖိနပ်ကျယ်ပြန့်အတွက်တင်ပြထားပါသည်, သူတို့သည်အဆင်းအရောင်နှင့်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်များများထဲတွင်အောက်ပါနေသောခေါင်းစဉ်:
အရည်အသွေးဝါးဝင်စားသောသွားရအနိမ့်ပေါ် options များ,
တစ်ကြော့စားဆင်ယင်မှလာကြလိမ့်မည်သည့်ဖိနပ်, ခြေနင်း, ဖိနပ် Banana Republic,
မျက်နှာသာတောက်ပပုံနှိပ်, ဇာ, ဖိနပ်အပေါ်ထိတွေ့အစိတ်အပိုင်းများ, တောက်ပသို့မဟုတ်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အလှဆင်ဒြပ်စင်အဖြစ်။
အိတ် Banana Republic
အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ထပ်လမျးညှနျခ - ကဖွင့်လက်ကိုင်အိတ် Banana Republic ။ ထိုသူတို့အဘို့, ထိုကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်မူထူးခြားသောဝိသေသ:
ဆက်စပ်ပစ္စည်းအိတ်ပခုံးပေါ်ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်ခွနှစ်ခုသေးငယ်တဲ့လက်ကိုင်ပြီးရှည်လျားပခုံးသိုင်းကြိုးရှိသည် ဖြစ်. ,
အဆိုပါကုမ္ပဏီမသာဗီရိုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အထူးပြု၎င်း၏ဒေသများ၏တဦးတည်းအိမ်သာရေ Banana Republic ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်, စပ်ပန်းနှင့်အရှေ့တိုင်းမှတ်စုခံစားခဲ့ရကြောင်းအရသာဖန်တီးပေးပါတယ်။ razlivayutparfyum အလွန်ဖော်ပြကြည့်ရှုရသောအဆိုပါပူဖောင်း, ဒါဟာမိုက်အစိမ်းရောင်ပတ်ပတ်လည်ပုလင်း, ဒါမှမဟုတ်, အစိမ်းအပြာသို့မဟုတ်အဝါနုရောင်ရှိသော၏အလင်းမှတ်စုများနှင့်အတူတစ်ဦး elongated အစတုဂံ။
အဆင်းလှသောလိင်အကြားအလွန်ရေပန်းစားအမျိုးသမီးဝိညာဉျ Banana Republic ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်များ၏စိတ်ဓါတ်များသိရှိစေရန်တစ်ဦးအခြို့သောနက်နဲသောအရာကိုဖန်တီးပါ။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်၏ရေမွှေးလိုင်းများများထဲတွင်အောက်ပါနေသောခေါင်းစဉ်:
ကျောက်ဖြူခွက်ကို - လိမ္မော်ရောင်, ကြာ, ဖရုံ, Currant နှင့် cranberry ၏မှတ်စုများပါရှိသည်;
Malachite - ငရုတ်ကောင်း, အစိမ်းသရက်သီးနှင့်ရေ hyacinth ၏မှတ်စုများရှိပါတယ်;
Wildbloom - ကမာလကာ, ကျွဲကောသီး, kumquat အခွံနှင့်သစ်တော်သီးကိုအသုံးပြုသည်၎င်း၏ပိုင်ရှင်များ၏ sensitivity ကိုပြသ;
WildbloomVert - ၏ဝိသေသဖြစ်သောဇာတ်ကောင်, အလေးပေး ဣတ္ , အကောင်းမြင်နှင့်စွမ်းအင်။ ဒီနေရာတွင်ထိုသစ်တော်သီး, ပန်းသီးနှင့်ခရမ်းရောင်အရွက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးအင်္ကျီ 2016-2017 - ဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်
Ugg ဘွတ်ဖိနပ် - အချိန်သည်ဆောင်းကာလ - ဖက်ရှင် 2016-2017
နွေရာသီလက်သည်းဒီဇိုင်းကို 2013 ခုနှစ်
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Demi-ရာသီအင်္ကျီကို 2013 ခုနှစ်,
ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ 2016 Bob
Frey လိမ့်မည် - ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်များမှအကောင်းဆုံးလက်ဝတ်ရတနာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
မက်စ်မာရ် - Fall-ဆောင်းရာသီ 2016-2017
တစ်မင်းသားနှင့်အတူရေးရာသူ 10 ဦးကျော်ကြား Cinderella
Francesco Donnie - ပြုလုပ်ခြင်းသည်အီတလီအရည်အသွေးနှင့်စတိုင်
Anne Hathaway က5လအရွယ်သားပြသ
Kim Kardashian ကစတိုင်လ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ 15 အထင်ကရအချိန်လေး
သားမွေးအင်္ကျီ Fox က
Zugzwang - ကဘာလဲဘယ်လိုထွက်ရသနည်း
ခရမ်းချဉ်သီး "snowman F1 ကို»
ကလေးတစ်ဦးရဲ့လက်ရေးကို fix လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Monstera - အဘယ်ကြောင့်အိမ်မှာစောင့်ရှောက်သည်မဟုတ်လော
အူမကြီးကင်ဆာ - လက္ခဏာများ
Teksamen - Analogues
နွေရာသီအဘို့အေးဟင်းချို - ချက်ပြုတ်နည်းများ